जानकी गाउपालिका वडा नं. ५ स्थित बाल विद्यामन्दिरमा अध्ययनरत २६ विद्यार्थीलाई छात्रवृति वितरण
जानकी गाउपालिकिा ववा नं. ५ स्थित बाल विद्यामन्दिरमा विपन्न घर परिवारका विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामाग्री खरिदका लागि छात्रवृति बितरण गरीएको छ । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई थोरै भएपनि केही राहत होस् भन्ने उदेश्यले छात्रवृति वितरण गरीएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडा कार्यालयले १ हजार ५ सयका दर राष्ट्रिय मा.वि. अमौरा, बालविद्या मन्दिर पथरैया, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय अमौरी, रुक्मणी प्रावि सात विगाहा गरी ४ विद्यालयका २६ विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति वितरण गरीएको हो ।
छात्रवृति वितरण गर्दै जानकी गाउपालिका अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले पहुच नपुगेका र आर्थिक रुपले पछाडी परेको बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उदेश्यले छात्रवृति वितरण गरिहेको बताउनु भयो । उहाले गणुस्तरीय शिक्षाको लागि गाउपालिकाले नीति नियम पास गरेको र अवका दिनमा त्यही अनुसार काम गर्ने बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष उमा महतोले शिक्षा भनेको बच्चाको नैसङ्र्गिक अधिकार भएकोले पनि विद्यालयमा वालवालीकाको पहुच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा साविक पथरैया गाविसका पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर बम, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य रामप्रसाद चौधरी, सोमप्रसाद चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रम वडाध्यक्ष भिमबहादुर थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा वृक्षारोपण पनि गरिएको थियो । वडा सदस्य सीता चौधरीले स्वागत गर्नु भएको कार्यक्रम सञ्चालन वडा सचिव भरत थापाले गर्नु भएको थियो ।